Xagjir Taram oo loola cararay dhufaysyada hoose ee madaxtooyada - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxa welli socda banaanbaxyo isku bedelay bililiqaysi dalkaasi Maraykanka kadib markii Askari booliisa uu si cad u diley nin madow. Askarigaas ayaan welli abaalkiisa la marin, marka la ergo sharciga la jira dembiilaha ee dalkaasi a waxa dhacaysa in ninkan cadaanku sii daayaan.
Haddaba dad aad uga caraysan cadaalad xumada dalkaasi sheegta xoriyada iyo ilbaxnimada laakiin ah dalka ugu liita labadaas xadaaradoodba, ayaa dadka dalkaasi dareemeen sida keliya ee ay ku heli karaan cadaalad ay tahay ayagoo nidaamka dhulka geliya, inkastoo xooga cadaanka uga faaiideystaan inay tukaanada dhacaan.
Xagjir Taram oo jimcihii banaanbaxyada gaareen aqalka cad ee uu degan yahay ayaa baqdin awgeed loola cararay dhufaysyada hoose ee aqalku leeyahay ee loogu talogalay inuu galo haddii dalka Ruushku ku weeraro hubka nukliyeerka.
Internet-ka iyo telfoonada oo go’an
Wararkii u dambeeyay ee xalay ka imaanayay Washinton ayaa la xaqiijay in qarax weyn dhacay saacadihii dambe kadibna isla markiiba Taram oo goostey khadka internet-ka iyo telfoonada.
Taas oo dhalisay cabsi in uu bilaabay inuu toogto dibed baxeyaasha. Waxa durba la waayay wax akhbaara. Saacadihii hore ee Isniinta ayaa waxa dib loo soo celiyay khadadka internet-ka iyo telfoonada.
Waxay tani muujinaysaa inuu kalatalisnimo iyo cadaadin ku bilaabey dadka dibed baxeyaasha xilli uu dalalka kale ku caayo ama weerari jireen dad ay dileen. Munaafaqad waa tani asyuu yiri Xuseen Warsame.